I-N26, i-Openbank kunye neOrange Cash, ukongezwa okutsha kwiApple Pay eSpain | IPhone iindaba
I-N26, i-Openbank kunye neOrange Cash, izongezo ezitsha kwiApple Pay eSpain
Phantse kunyaka ophelileyo iApple Pay yaqala ukubonwa eSpain ngeBanco Santander, iAmerican Express kunye neCarrefour Pass, kwaye emva kweenyanga ezininzi ngaphandle kokongezwa kule nkonzo yokuhlawula iApple kubonakala ngathi inkampani inyathele kwisantya sokudibanisa amaqabane amatsha ngaphambi kokuphela kwe2017. . Njengoko kwakuthenjisiwe, i-N26 ijoyine ngaphambi kokuphela konyaka, kodwa zongezwa ezinye izinto ezintsha kwi-Apple Pay ngaphandle kwesaziso sangaphambili: i-Openbank kunye ne-Orange Cash..
Ngale khathalogu ibanzi yamaziko asebenzisanayo neApple Pay Iqonga lokuhlawula lika-Apple liba yenye yezona ndawo zixhaphakileyo kwilizwe lethu, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo inani lezixhobo ezisebenzayo ezihambelana nale ndlela yokuhlawula, ukusuka kwi-iPhone 6 ukubheka phambili. Kukho ukhetho kuzo zonke izinto ozithandayo: ukusuka kumakhadi ahlawulelwa kwangaphambili kwiibhanki ezikwi-Intanethi okanye kwiibhanki eziqhelekileyo.
Kulabo baneziko lemali elithandabuza ukujoyina iApple Pay, kukho iindlela ezinomdla kakhulu zokusebenzisa iqonga lokuhlawula iApple. I-N26 okanye i-ImaginBank ziibhanki ezimbini ezikwi-intanethi ezikuvumela ukuba wenze iakhawunti kwimizuzu embalwa kwi-Intanethi ngokupheleleyo, kunye nekhadi lokutsala simahla ngaphandle kweendleko zokugcina. Ngelixa i-ImaginBank inenethiwekhi yee-ATM zeCaixabank, i-N26 ikuvumela ukuba urhoxe ukuya kuthi ga kwinyanga ezi-5 ngenyanga kuyo nayiphi na i-ATM. Zombini ezi akhawunti zilawulwa enkosi kwizicelo zazo zeefowuni eziphathwayo. I-Boon yikhadi elihlawulelweyo elingenayo i-akhawunti yebhanki efakiweyo, kodwa ibandakanya ikhomishini encinci xa uyitshaja ngokutsha, kwaye ayinakho ukurhoxa kwii-ATM.
I-Orange Cash yiplatifomu yokuhlawula iOrange ekhethe abantu abancinci njengabantu ekujoliswe kubo, kwaye emva kweminyaka eliqela kwimarike befuna ukujoyina iqonga lokuhlawula le-Apple, kwisicwangciso esinokuthi silandelwe ngabanye. Endaweni yokukhala nge-Apple engabaniki ukufikelela kwi-chip ye-NFC ukuze bakwazi ukwenza iintlawulo ngokuthe ngqo kwiselfowuni, bathathe isigqibo sokuba "ukuba awukwazi ukubetha utshaba, mjoyine.", kwaye ngoku ikhadi lakho elihlawulelwa kwangaphambili lifakiwe kwiApple Pay ukuze kungabikho kuphela abasebenzisi be-Android abanokuhlawula ngeselfowuni.
Kubonakala ngathi phantse unyaka wonke kwimarike iApple Pay ifumana ukubaluleka eSpain, iindaba ezimnandi kuthi kuthi abafuna ukuphela ekuphatheni amakhadi ethu nathi, ukusukela oko ilizwe lethu lelinye lalawo angene kwiiterminal zokuhlawula ngaphandle konxibelelwano kakhulu, Ekuphela kwemfuneko yokuba iApple Pay isebenze xa ihlawula. Siyathemba ukuba onke amaziko emali axhathisayo, afana neBankia okanye iBBVA, kunye nalawo sele esebenza kwamanye amazwe afana ne-ING, aza kujoyina kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-N26, i-Openbank kunye neOrange Cash, izongezo ezitsha kwiApple Pay eSpain
Into ye-ING eSpain iyamangalisa. Ukususa iiakhawunti zabo kwaye babuyisele eHolland.
I-iOS 11.2 iya kuzisa ukutshaja ngokukhawuleza kweetshaja ezingenazingcingo ze-7,5w
Baqikelela ukuthengiswa kwezigidi ezingama-20 zee-AirPod kwaye balindele ngaphezulu